Madaxweyne Xasan oo kasoo laabtay booqasho uu ku tegay 4 ka mid ah dalalka dunida – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay kaddib markii ay socdaal ku tegeen dalalka Belgium, Kenya, Rwanda iyo Burundi, halkaasi oo ay kula kulmeen mas’uuliyiinta dalalkaasi.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdiga la socday ayaa markii ay soo gaareen garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Aadan Cadde , waxaa halkaasi ku soo dhaweeyay Guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari, xubno ka tirsan labada gole ee dowladda, Saraakiisha ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya iyo xubno kale.
Wasiirka arrimaha dibedda ee Xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo lahadlay Warbaahinta ayaa sheegay in Wafdiga Madaxweynaha ay socdaal ku tegeen magaalada Brussels ee dalka Belgium halkaasi oo ay uga qeyb galeen shirkii ay isugu yimaadeen Hogaamiyeyaasha Midowga Afrika iyo kuwa Midowga Yurub ee looga hadlayay waxyaabaha ka dhexeeya dalalkaasi, isagoo xusay in shirkaasi uu ku soo dhamaaday guul.
Wasiirka ayaa hoosta ka xariiqay in Wafdiga Madaxweyne Xasan Sheekh ay magaalada Kigali ee xarunta Rwanda uga qeyb galeen 20 guuradii ka soo wareegtii xasuuqii ka dhacay dalkaasi, islamarkaana ay labada Madaxweyne ka wada hadleen xoojinta xiriirka labada dal ka dhexeeya iyo in Soomaaliya ay tusaale u noqoto sida ay uga soo kabsadeen dagaalladii ahliga ahaa ee dalkaasi ka dhacay.
Ugu dambeyntii, Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa xusay inay socdaal ku so mareen Dalka Burundi, halkaasi oo uu Madaxweymuhu kula kulmay dhigiisa dalka Burundi oo ay isla soo hadal qaadeen arimo ay ka midtahay xoojinta xiriirka labada dal, maadaama dalka Burundi uu ka midyahay wadamada ay ciidamadoda ka joogaan Soomaaliya ee qeyta ka ah howlgalka AMISOM, waxaana uu Wasiirku tilmaamay in Muqdisho uu dhawaan soo gaari doono Madaxweynaha dalka Burundi.